कांग्रेस हराएको सूचना - नेपालबहस
कांग्रेस हराएको सूचना
| १४:०२:५१ मा प्रकाशित
राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि स्थापना भएको कांग्रेसले राजा र जनता दुबैको सहभागितामा २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्यायो । नेपाली जनतालाई १०४ बर्षसम्म एकछत्र शासन गर्ने जहानियाँ राणाशासनबाट मुक्ति दिलायो । त्यसबेला ३० बर्ष मुनिका जिउँदा नेपालीको साहस र हिम्मत देखेर राणाहरु मात्र हैन सिंगो हिन्दुस्तानसमेत डरायो ।
जनताको पक्षमा गरिएका राम्रा कामहरु र जनताका घर आँगनमा पुगेर जनताका समस्यामा साहारा बनेको देखेर जनताले पनि २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई नै मन पराए । झण्डै प्रतिपक्ष शुन्य, प्रकाण्ड बहुमत ल्याएर नेपाली कांग्रेसले सरकार बनायो । त्यो बेलाको नेपाली कांग्रेसको देश बिकासको नीति, कार्ययोजना, नागरिकको समर्थन र सहयोग, नागरिकको प्रजातन्त्रप्रतिको उत्साह र नेतृत्वप्रतिको विश्वासका कारण त्यसबेलाका नेताहरुमा पनि देशमा बिकासको मुल फुटाउने हौसला पलायो ।
तर राजा महेन्द्रलाई कांग्रेसको त्यस प्रकारको विकास योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यशैलीले अब नेपाली कांग्रेसले यो देशमा बर्षौसम्म एकछत्र नेतृत्व गर्दै विकासको बाटोमा देशलाई हिडाउने भो भनेर अत्यन्तै क्रुद्ध र आक्रामक बनायो । त्यहि भएर जनताद्धारा निर्वाचित सरकारले शासनसत्ता सम्हालेको दुई बर्ष पनि नपुग्दै २०१७ सालमा राजाबाट जनताले रोजेर जनताकै प्रत्यक्ष मताधिकारद्धारा स्थापित सरकारलाई टुँडिखेलबाटै झ्यालखाना तर्फ पठाईयो । उक्त स्थानमा राजाका नाभीबाट पञ्चायत नामको निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था जन्माईयो । जनताद्धारा निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरुलाई जेलमा हालियो ।
नेपाली कांग्रेसले बनाएका देश विकासका योजनाहरुलाई फोहोरको टोकरीमा लगेर फालियो । कांग्रेस भएकै कारण कत्तिको सर्वस्वहरण गरियो । कति देशमा पञ्चायतको कठोर यातना खप्न नसकेर निर्वासनमा बसे । कति झुठा मुद्धामा जीवनभर नराम्रोसँग फसे । पञ्च नामको गोमन सर्पले स्वतन्त्रताका पक्षपाती नेपाली जनतालाई डस्नुसम्म डसे । तर पनि देशमा कांग्रेस अझै जिउँदै छ भन्ने भान थियो ।
कुनै पनि नागरिकलाई म कांग्रेस हुँ भन्ने कुराको शान थियो । बीपी कोइराला थिए, जसले कठोर यातना र चरम अभावमा पनि कार्यकर्तालाई बिचलित हुन दिएनन् । अहिलेका नेताको जस्तो विदेशीको पाउ परेर कुनै पनि मुलुकसँग आनासुकी सहयोग पनि लिएनन् । स्वाभिमानका साथ नेपाली कांग्रेसलाई अनि कांग्रेसले अंगीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अझ परिस्कृत र समय सान्दर्भिक रुपमा ब्याख्या गरे ।
नेपाली दुर्गम गाँउ र बस्तीहरुलाई कसरी बिकास गर्ने भन्ने ध्याउन्नमै आफ्नाे सम्पूर्ण जीवनका उर्भर समय बिताए । कांग्रेस भएकै कारण जीवनभर जेलको चौघेरामै आफ्नाे सम्पूर्ण जीवन बिताए । कति नेपाली कांग्रेसका होनहार कार्यकर्ताहरुले क्रुर पञ्चायती ब्यवस्थाका हिमायतीहरुको बन्दूकको गोली खाए, कतिले आफ्नाे व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पञ्चायत नामको बिष बृक्षसँगै मित लगाए ।
कांग्रेसको गैर जिम्मेवार निर्णयका कारण विश्वको एकमात्र हिन्दू राज्य हराएको छ । सनातन हिन्दू राष्ट्रसँगै सयौं बर्षदेखि नेपाल निर्माणमा सकृय भूमिका निर्वाह गर्ने राजसंस्था हराएको छ । नेपाली नेपाली बीचको एकता हराएको छ । नेपाली नेता हुँ भन्न रुचाउने क्रिश्चियनका पादरीहरुप्रति जनताको जनविश्वास हराएको छ । काठमाडौंमा बसेर सरकारी ढुकुटी रित्याउन पल्किएका अपराधी सोचका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता बढेर गएको छ । ईमान्दार कार्यकर्ता अहिले आएर झनै ओझेलमा परेका छन् । नेपाली कांग्रेस सिध्याउन सकियो भने नेपालमा एकछत्र शासनसत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्टहरुको मनोबल बढेको छ ।
०४६ सालमा नेपाली कांगेसले देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको शंखघोष गर्यो । पञ्चायतद्धारा पारितोषित प्राप्त गरेर कांग्रेस सिध्याउन खटाईएका संगठनहरुसमेत देशमा प्रजातन्त्र नामको ब्यवस्था ल्याउन सकियो भने आफैं सत्तामा पुगेर ब्रम्हलुट मच्चाउन सकिन्छ भनेर आन्दोलनमा सहभागी भए । पञ्चायतले नागरिक आन्दोदनको दवाव थेग्न सकेन ढल्यो । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा देशमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले संबिधान बनायो, चुनाव गरायो । युगपुरुष माहामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाको राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा यो देशमा नेपाली कांग्रेसले दुई दुई पटक स्पष्ट बहुमत पनि पायो ।
नेपाली कांग्रेसलाई भने मान्नु नै पर्छ, कहिले प्रजातन्त्रका सिद्धपुरुष सन्तनेता किसुनजीलाई हराएर भए पनि एकलौटी सरकार बनायो, कहिले तिनै किसुनजीलाई हतियार बनाएर फेरि पनि स्पष्ट बहुमत ल्यायो । २००७ सालदेखि प्रजातन्त्रका लागि अनवरत रुपमा संघर्ष गरेका तिनै त्यागी महापुरुषलाई रुवाएर घरको न घाटको बनायो । सर्वमान्य नेताको सम्मान पाएका वीर गणेशमान सिंहको समेत नराम्ररी मन दुखायो ।
कांग्रेस मात्र यस्तो राजनीतिक दल निस्कियो, जसले कहिले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो, कहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई आफ्नो समर्थन जनायो । जे भएपनि त्यतिबेलासम्म यो देशमा नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी थियो । जनताले अझै केही गर्छ कि ? भन्ने आशा गरेका थिए ।त्यही भएर त नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले दुई-दुई पटक स्पष्ट सरकार चलाउने बहुमत दिए । तर अहिले यो देशमा नेपाली कांग्रेस पार्टी हराएको छ । पार्टी सँगै उसले अंगिकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त हराएको छ ।
त्यही कांग्रसको गैरजिम्मेवार निर्णयका कारण विश्वको एकमात्र हिन्दूराज्य हराएको छ । सनातन हिन्दू राष्ट्रसँगै सयौं बर्षदेखि नेपाल निर्माणमा सकृय भूमिका निर्वाह गर्ने राजसंस्था हराएको छ । नेपाली नेपाली बीचको एकता हराएको छ । नेपाली नेता हुँ भन्न रुचाउने क्रिश्चियनका पादरीहरुप्रति जनताको जनविश्वास हराएको छ । काठमाडौंमा बसेर सरकारी ढुकुटी रित्याउन पल्किएका अपराधी सोचका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता बढेर गएको छ ।
ईमान्दार कार्यकर्ता अहिले आएर झनै ओझेलमा परेका छन्। नेपाली कांग्रेस सिध्याउन सकियो भने नेपालमा एकछत्र शासनसत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्टहरुको मनोबल बढेको छ । यस्तो अवस्था देखेर नेपाली जनताको भने बिस्तारै नेपाली कांग्रेसप्रतिको विश्वासमा तुषारापात पर्दै गैरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको यस्तो हविगतबाट माथि उठाउन फेरि सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले डा. शेखर कोईरालालाई पार्टीको सभापति बनाउनु परेको छ । खस्किएको नेपाली कांग्रेसको शाख जोगाउँदै नेपाली कांग्रेसलाई पुर्नस्थापित गराउन साहस, आँट र हिम्मत गर्नु परेको छ । जागौ, उठौं ! सबै नेपाली कांग्रेसका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम माहाकालीसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको एउटै आवाज, एउटै बोली बनाऔं । जय नेपालको नारा लगाउँदै डा. शेखर कोईरालालाई पार्टीको सभापति बनाऔं ।
के यी सबै “लालगद्धार” नै हुन् त ? २ दिन पहिले
जिल्ला नगरको सवलिकरण र व्यवसायिक हकहितका लागि मेरो उम्मेदवारी : श्रेष्ठ ४ दिन पहिले
नेकपा भित्रको किचलोमा कांग्रेसको कुनै सरोकार छैन : नेता सिंंह ६ दिन पहिले
कांग्रेसका सांसद पाण्डेले लिए गोपनीयताको सपथ ६ दिन पहिले
विद्यालयमा दिइने सजायको स्वरूप बदलियो ८ मिनेट पहिले
बुन्डेसलिगामा बार्यन जित्दा हल्याण्डको डर्टमुण्ड पराजित ३५ मिनेट पहिले
नगरप्रमख थापासहित बैतडीका थप १८ जनामा कोरोना पुष्टि ५५ मिनेट पहिले
पुनःनिर्माणका अनुभव र सिकाइको अभिलेख राख्न वेविनारका सुझाव महत्वपूर्ण ५६ मिनेट पहिले
दुर्गमका स्वास्थ्य केन्द्रमा भिडियो एक्सरे सेवा ५ दिन पहिले
अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग अफगान सरकार र तालिबान वार्ताका संयोजकहरुको भेट ७ दिन पहिले
सुदूरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन पहल ५ दिन पहिले
प्रचण्डको त्याग र ओलीको दम्भले निम्त्याएको नेकपाको राजनीतिक बिचलन ४ हप्ता पहिले
नेकपा विवाद : राष्ट्रपतिको मर्यादा र चिनियाँ राजदूतको सक्रियता ३ दिन पहिले
नेपाल–भारत सीमा जोड्ने झोलङ्गे पुल दुई दिन खुल्ने ३ दिन पहिले
धनगढीमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम १ महिना पहिले
नयाँ बर्ष २०७७ शुरु हुँदै, लकडाउनले घरभित्रैबाट स्वागत ! ८ महिना पहिले
चीनको बेइजिङमा अकस्मात नयाँ कोरोना सङ्क्रमित भेटिए ६ महिना पहिले
बन्दाबन्दीमा मानसिक तनावका कारण आत्महत्या बढ्यो ४ महिना पहिले